apple & apos; s iphone 11 pro inoderera kusvika ku $ 0 mune inoshamisa new dhizaini isingade kutengeserana-mukati
Kuru Nhau & Ongororo Apple & apos; s iPhone 11 Pro inoderera kusvika ku $ 0 muchiitiko chitsva chinoshamisa chisingade kutengeserana
Apple & apos; s iPhone 11 Pro inoderera kusvika ku $ 0 muchiitiko chitsva chinoshamisa chisingade kutengeserana
Ndi & apos; s China, uye vatengi-vekuvhima Verizon vatengi vanogona kunge vatoziva chaizvo zvazvinoreva. Ndizvozvo & apos; s, iyo hombe nharembozha inoshanda muUS yakatanura imwe batch inoshamisa online-chete maekisheni madhiri, uye uzvitende kana kwete, vhiki rino & kukwidziridzwa kwepamusoro kuri nani pane izvo zvakapihwa nemutakuri kutanga kwemwedzi uno iPhone 11 Pro vatengi .
Ehe, yekupedzisira 2019-yakaburitswa 5.8-inch handset parizvino inowanikwa pamutengo wakaderera pane $ 240. Muchokwadi, iro simba reApple A13 Bionic rakachipa kupfuura nakare kose, neBig Red ichitadza kuenda chero yakaderera pane iyi.
Kuwana Apple & apos; s iPhone 11 Pro zvachose mahara, iwe & apos; zviri pachena kuti unoda kuzadzisa zvishoma zvakakosha, asi kana iwe & apos; uchinyatso ziva nemhando idzi dzezvibvumirano, haufanire kuwana mamiriro akasarudzika kunyanya kudzvinyirira kana kusagadzikana. .
64GB, Akasiyana Mavara, Mutsva Mutsva uye Unlimited Chirongwa Chinodiwa
$ 0 $ 99999 Yapera
Isu & apos; isu tinongotaura nezve kuvhura mutsara mutsva webasa risingabatsiri (kungave pane nyowani nyowani kana iripo Verizon account) uye kusarudza iyo 'inokodzera' Yekuganhurira chirongwa, isina chishandiso chekutengesera-mukati kana nhamba yechiteshi-yakabatanidzwa uye isina kana chirongwa chepamwedzi chenguva chinodiwa kuti uwane mukana wakakura wemadhora mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe mumabhiri emwedzi.
Iyo chaiyo yakakurisa dhisikaini inoshanda kune ese ari makumi matanhatu neshanu nemakumi maviri nemashanu GB emosiyano emukomana uyu ane komputa yakaipa ine yakanakisa OLED kuratidza uye yakanakisa katatu kumashure-yakatarisana nekamera system mukutakura, funga iwe, zvinoreva kuti hoarders edhijitari achazoda kubhadhara $ 150 iyo yekupedzisira.
Hazvirevi izvo zvese-kutenderedza nharembozha mari inogona kutenga mushure megore rapera & apos; s 5G-inogoneswa iPhone 12 yemhuri kuvhurwa, iyo 4G LTE-chete iPhone 11 Pro zvine nharo zviri nani munzira dzakawanda kupfuura dzakawanda dzanhasi & apos; s yakanakisa bhajeti 5G mafoni , tisingataure iyo akanakisa epasi- $ 400 mafoni Kunze Uko.
Usakanganwe kuti unongova neSvondo, Chikumi 27 kuti utore yako yemahara iPhone 11 Pro ... kunze kwekunge ichi chinhu chikazoguma chotevera muenzaniso weayo asiri-Pro mukoma, uyo anga ari iri kutengeswa ne $ 0 uye zvichikwira kuVerizon kwevhiki nhatu dzakanaka izvozvi.
iphone se 2020 hupenyu hwebhatiri
sei vanhu vachivenga apuro
Best Amazon Prime Day Makaralı Mutauri anobata izvozvi
LG G5 module: kunyatso tarisa
Pokemon GO AR + modhi ikozvino yave kuwanikwa pane Android, asi inoda ARCore
T-Mobile zviri pamutemo zvese zviri kunze kweGoogle mafoni pamberi pePixel 4a kuvhurwa
Aya maApp Store maapps anonyanya kuba data rako rega
iOS 15 inounza makuru matsva maficha kuApple Mepu
AT & T & apos; s Samsung Galaxy Note 4 uye Samsung Galaxy Note Edge iri kuvandudzwa ku Android 5.1.1
OnePlus 7 Pro vs Samsung Galaxy S10 +: kuigadzira
Google inoburitsa nzira yekubatsira mutyairi uye COVID zvinoenderana neGoogle Mepu